Maxaabiis Maanta la keenayaa Muqdisho + Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxaabiis Maanta la keenayaa Muqdisho + Sawirro
Maxaabiis muddo sanado ah ku qaatay xabsi ku yaalo Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa maanta oo tallaado ah waxaa lagu wadaa in laga soo dejiyo Magaalada Muqdisho, kadib markii ay soo dhameysteen xukunadii lagu xukumay.
Maxaabiistaan ayaa ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen Kooxaha Burcad badeeda Somalida, balse xukunkii lagu riday ayaa u soo dhamaaday.
Qunsulka Safaarada Somaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheekh (Bagadi) ayaa maxaabiistaan shalay ugu tagay xabsigii ay ku xirnaayeen, wuxuuna halkaasi ugu geeyay tikadhadii ay ku soo bixi lahaayeen maanta oo Talaado ah.
“Walaalayaal sida aad la socotaan 20 cisho ka hor waxaan xabsiga Kimiti ee duleedka magaalada Nairobi aan ku booqanay oo aan ka sii deynay muwaadiniin Somaliyed oo xabsiyo dhameystay, maantana waxaan soo booqanay kuwo kale oo maanta dib ugu laaban doono dalka Somaliya kaddib markii ay dhameysteen xabsiyadooda, Waxaan u keenay dhar, tikidho iyo go home yo.” ayuu yiri Cali Bagadi.
Xukunada ay dhameysteen Maxaabiistaan ayaa u dhaxeeyay 9-ilaa 8-sano, waxaana tiradooda ay gaareysaa ilaa 7 ruux oo dhalinyaro ah.
Saacadaha soo socda ee maanta ayaa lagu wadaa in maxaabiistaan ay ka soo degaan Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho, iyaga oo ka soo kicitimaya Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Xabsiyada Kenya waxaa ku xiran dhalinyaro sidan oo kale ugu eedeysan Burcad badeednimo iyo qaar eedooda ay tahay arimaha la xiriira Shabaab.